Shan siyaasi oo saameyn ku leh Soomaalia kuwaas oo wax kusoo bartay Suudaan. – Xeernews24
Shan siyaasi oo saameyn ku leh Soomaalia kuwaas oo wax kusoo bartay Suudaan.
14. April 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Taliska Milatariga Suudaan ayaa shaaciyay in xilkii laga qaaday isla markaana meel amaan ah lagu xidhay madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan AlBashiir.
Militariga ayaa sheegay inuu AL-Bashiir dalkiisa ku wajihi doono Maxkamad isla markaasna aysan dhici doonin in loo dhoofiyo meel ka baxsan Suudaan.
Madaxweynihii hore ee Al-Bashiir ayaa si weyn usoo garab istaagay dadka Soomaaliyeed Xilligii ay dhacday Dowladdii Maxamed Siyaad Barre markaas oo uu u fidiyey Waxbarasho lacag la’aan ah iyo inuu u tababaro Booliska.
Haddaba waxaa warbixintaan kusoo qaadan doonaa Soomaalida wax kusoo baratay Dalka Suudaan ee hadda saameynta ku leh Siyaasadda Soomaaliya.
1) Maxamed Cumar Dalxa
Waa Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya muddana kasoo tirsanaa, sidoo kalana wuxuu ahaan jiray Fanaan Soomaaliya caan ka ah.
Wuxuu kamid ahaa Ardaydii wax kusoo bartay dalka Suudaan mudana halkaas ku noolaa.
2) Cabdiraxmaan Xuseen Odowaa
Odawaa oo horey usoo noqday Wasiirkii Arrimaha Gudaha xilligii Xasan Shiikh Maxamuud isla markaasna hadda ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kamid ahaa dadkii wax kusoo bartay dalka Suudaan.
1992 ayuu waxbarashadiisa kusoo qaatay dalka Suudaan ka hor inta uusan kusoo laaban dalka Soomaaliya oo uusan kamid noqon siyaasiyiinta saameynta leh.
3) Axmed Macallin Fiqi
Waa xubin ka tirsan Guddiga Difaaca ee Baarlamaanka Soomaaliya, waana shakhsi saameyn xoog leh ku leh Siyaasadda Soomaaliya, wuxuuna horey usoo noqday taliyaha ciidamada nabad sugidda.
Fiqi ayaa dalka Suudaan waxbarashadiisa kusoo qaatay intii uu dhaxeysay 1992 illaa 1998.
4) Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame
Kadib markii ay burburtay Dowladdii Dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa kamid ahaa dadkii nasiibka u leh inay wax ku bartaan Dalka Suudaan.
Cabdiraxmaan oo hadda ah Hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayey isku lood ahaayeen Shiikh Shariif Shiikh Axmed Sanadkii 1993.
Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah ayuu ka noqday Dowladdii uu hormuudka uhaa Saaxiibkiis Sheekh Shariif.
5) Sheekh Shariif Sheekh Axmed
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shiikh Shariif Sheekh Axmed oo horeyna usoo noqday hoggaamiyihii Maxkamadda Islaamiga ayaa kamid ah Dadka saameynta leh ee wax kusoo bartay Jaamacadaha ku yaal Dalka Suudaan sanadkii 1993.
Sheekh Shariif ayaa markii dambe kasoo tagay dalka Suudaan, wuxuuna Waxbarashiisa kusoo dhameystay dalka Liibiya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/04/somali.jpg 614 1023 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-04-14 08:45:032019-04-14 08:46:40Shan siyaasi oo saameyn ku leh Soomaalia kuwaas oo wax kusoo bartay Suudaan.
Daawo Cabdi Good oo loo Hanjabay iyo cabsi soo food saartay Qoraalkan waxaan uga dan leeyahay inaan baaq u diro Barbaarta .